Bụ Visual Studio Code Ihe Kachasị Mma OsX Code Editor Na Ahịa?
Saturday, March 6, 2021 Fraịde, Machị 5, 2021 Douglas Karr
Kwa izu m na-ewepụta ezigbo enyi m, Adam Small. Adam bụ nnukwu onye nrụpụta… ọ mepụtara usoro azụmaahịa ụlọ niile nwere nnukwu atụmatụ - ọbụlagodi na-agbakwunye nhọrọ nhọrọ ozugbo maka ndị ọrụ ya iji zipu postkaadị n'ebughị ụzọ chepụta ha! Dị ka m, Adam mepụtara dịgasị iche iche nke asụsụ mmemme na nyiwe. N'ezie, ọ na-eme ya n'ọrụ na kwa ụbọchị ebe m na-etolite mmepe ọ bụla
Ndekọ maka iMovie na Igwefoto Weebụ na Igwe okwu Dị Iche
Tọzdee, Machị 4, 2021 Tọzdee, Machị 4, 2021 Douglas Karr
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na posts Martech Zone dị ka azụmaahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu na-etinye usoro atụmatụ vidiyo iji wuo ikike na ntanetị yana draịva na-eduga na azụmaahịa ha. Mgbe iMovie nwere ike ịbụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu nyiwe maka edezi vidiyo n'ihi na nke ala nke iji, ọ bụghị otu n'ime ihe ndị kasị siri ike video edezi nyiwe. Na, anyị niile maara na ịdekọ ọdịyo site na igwefoto laptọọpụ ma ọ bụ kamera weebụ bụ ihe jọgburu onwe ya